3 ngwọta maka "nwere ike ghara ihichapụ faịlụ" njehie
1.Possible mere na "nwere ike ghara ihichapụ faịlụ" nsogbu etịbe
2.Solutions dozie "nwere ike ghara ihichapụ faịlụ" nsogbu
3.Tips & Aghụghọ
Ọ bụ nnọọ manụ ịhụ ozi na "faịlụ apụghị-ehichapụ" mgbe ị na-agbalị tufuo faịlụ na ị na-adịghị mkpa ọzọ. N'ọnọdụ ụfọdụ, e nwere ndị dị mfe ọnọdụ iji zere nke a ụdị ozi ma ọ bụ ụzọ jikwaa mfe ọnọdụ ahụ. Ma, e nwekwara ọnọdụ ebe novices ike aka nhichapụ nke ụfọdụ faịlụ na. Ọ bụrụ na nke a bụ gị ikpe, ihe ngwọta kasị mma bụ na-ekwu okwu na a Windows ọkachamara onye maara ihe bụ NTFS ihe atụ.
Otú ọ dị n'isiokwu a na-egosi mfe eziokwu izere ma ọ bụ ịkpachara anya na. The omume na-aduak inye nduzi maka novices na ndị ọkachamara dị ka mma.
Part 1 ekwe Omume mere na "nwere ike ghara ihichapụ faịlụ" nsogbu etịbe
1.The faịlụ ị na-agbalị ka ihichapụ bụ na iji
Faịlụ na ojiji nwere ike ịbụ n'ezie na-emeghe ebe ma ọ bụ ọ pụrụ ịbụ na rue mgbe nhichapụ ọnọdụ. Iji hụ niile faịlụ na-agba ọsọ Filiks, emeghe Malite Task Manager na nso si n'ebe ahụ faịlụ site na ịpị Ọgwụgwụ Task.
2.Access na faịlụ na-agọ
Ọ bụrụ na ị na-agbaso mgba a faịlụ usoro nrụrụ aka, a gbochie ohere ka faịlụ. Na ọtụtụ nke ikpe na ị bụghị ike ihichapụ faịlụ ma ọ bụrụ na faịlụ usoro na-emerụ na ngwọta nwere ike ịbụ na-agba ọsọ a Windows ịba uru iji dozie nsogbu a.
3.The faịlụ aha na-agụnye ihe ghara ịdị irè aha, gụnyere na ohere aha
Ọ bụrụ na ị chọọ a faịlụ aha ya bụ "text.txt" na ị ahụghị ya, eleghị anya, bụ ikpe na i na-eji ohere tupu tbat okwu. N'ihi ya, ọ bụrụ na gị na faịlụ a na aha ya bụ "text.txt", ị ga-iji faịlụ aha kpọmkwem.
4. Your faịlụ aha-agụnye a echekwabara aha Win32
E nwere kpọmkwem faịlụ na aha debeere nanị maka Windows arụ ọrụ usoro. Iji nyegharịa ụdị faịlụ, i nwere ike iji onye na-abụghị Win32 usoro.
Part 2 Solutions dozie "nwere ike ghara ihichapụ faịlụ" nsogbu
Ị nwere ike a lee anya na mmanya na-emeghe faịlụ ebe ejikari ị pụrụ ịhụ niile faịlụ ị na-eji na oge. Mechie faịlụ na-agbalị ka ihichapụ ya. Ọ bụrụ na ị ka na-enwe mkpa, eleghị anya n'ihi na na faịlụ ka na ojiji, na-emeghe Task Manager. Iji ịhụ gị niile oghe faịlụ na Filiks, emeghe Malite Task Manager site na ịpị na n'otu oge ahụ [Ctrl] + [Alt] + [Del] igodo.
Ọ bụ mfe nhọrọ na-emechi a faịlụ na-adịghị na-aza. Mgbe ị na-ele na ndepụta na faịlụ na Filiks, họrọ faịlụ na ị chọrọ imechi na pịa "Ọgwụgwụ Task".
Renaming nke faịlụ-eme ka ị nsogbu, ọ bụ otu nhọrọ maka idozi nhichapụ nke ndị faịlụ. Ị ga-emerịrị iji a ndị na-abụghị Win32 omume, dị ka POSIX ngwá ọrụ na-eji ihe kwesịrị ekwesị esịtidem syntax maka ndị faịlụ. Eleghị anya ndị a omume na-bu n'obi ọkachamara.
Ọ bụrụ na a rụrụ arụ faịlụ gị usoro na-egbochi ohere faịlụ, ị kwesịrị ị na-agba ọsọ Chkdsk ịba uru na disk olu ịgbazi ọ bụla njehie mgbe atule nke ihe ọjọọ ndi.
Nkebi nke 3 Atụmatụ & Aghụghọ
Solutions 1 na 3 na-mfe ime na unu adịghị mkpa ịdị na-a Windows ọkachamara na-eme ka ndị a na-eme. Eleghị anya ị na-eji tupu mmalite Task Manager ikiri arụmọrụ nke gị usoro. N'otu ụzọ ahụ, ị ​​pụrụ ịhụ na-akwụsị a ọrụ ahụ ị na-achọghị na-agba ọsọ ọzọ. The Tulee Disk ịba uru a maara nke ọma (ma ọ bụ na ọ ga-) maka Windows ọrụ. Ọ na-atụ aro na-agba ọsọ a atule maka gị usoro ugboro ugboro; ihe ọ bụla ikpe mgbe ụfọdụ nsogbu ime. Nke abụọ usoro maka renaming faịlụ na-achọ a ụfọdụ larịị nke ihe ọmụma na ubi nke Informatics.
Top 13 kasị mma Text Ozi ngwa ọdịnala n'ihi Android Devices
> Resource> ihichapu> 3 ngwọta maka nwere ike ghara ihichapụ faịlụ njehie